Kungani Kufanele Ugweme Izithombe Ezingcolile? | Intsha Iyabuza
ULIMI Hindi (Roman) ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Efik Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iban Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Ukraine IsiBemba IsiBhunu IsiBislama IsiBulgaria IsiCebuano IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanishi IsiDashi IsiFiji IsiFinishi IsiFulentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGreki IsiHebheru IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMacedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMalta IsiMyanmar IsiNgabere IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPapiamento (SaseCuraçao) IsiPedi IsiPolishi IsiPunjabi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSamoa IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSuthu (SaseLesotho) IsiSwahili IsiSwidi IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTonga IsiTsonga IsiTswana IsiTumbuka IsiTurkey IsiTurkmen IsiTwi IsiTzotzil IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) ULimi Lwezandla LwaseBrazil ULimi Lwezandla LwaseChile ULimi Lwezandla LwaseColombia
Ingabe ungakwazi ukugwema izithombe ezingcolile?
Indlela yokugwema izithombe ezingcolile
Ingabe ukulungele ukugwema izithombe ezingcolile?
Uma usebenzisa i-Internet, kumelwe ukulindele ukuthi uzozithela phezu kwezithombe ezinokungcola kohlobo oluthile. UHayley oneminyaka engu-17 ubudala uthi: “Akusadingeki ngisho nokuba uzifune. Yizona ezifuna wena.”
Izithombe ezingcolile zingalinga ngisho nalabo abazimisele ngempela ukuzigwema. UGreg oneminyaka engu-18 uthi: “Ngazitshela ukuthi angisoze ngazivumela ukuwela kulolo gibe, kodwa ngagcina sengiwele kulo. Ungasho ukuthi ngeke kwenzeke kuwe.”
Namuhla, sekulula kakhulu ukungena kuzo. Kanti futhi njengoba sekwande ukuthumelelana izithombe zocansi ngomakhalekhukhwini, intsha eningi isinezazo izithombe ezingcolile ezithumelayo.
Iphuzu elisemqoka: Ubhekene nenselele enkulu kunaleyo abazali bakho noma ugogo nomkhulu wakho ababebhekene nayo ngesikhathi bengangawe. Umbuzo uwukuthi, Ingabe uzokwazi yini ukugwema izithombe ezigcolile?​—IHubo 97:10.
Impendulo ingu-yebo​—uma ukhetha ukwenza kanjalo. Kodwa okokuqala kudingeka uqiniseke ngokuthi ukubuka izithombe ezingcolile kubi. Asicabangele izinganekwane namaqiniso ambalwa ngale ndaba.
Inganekwane: Izithombe ezingcolile ngeke zingilimaze.
Iqiniso: Izithombe ezingcolile zingcolisa ingqondo yakho njengoba nje nogwayi uwangcolisa amaphaphu akho. Ziyakungcolisa. Zilulaza ukuba yigugu kwento uNkulunkulu ayidalela ukuba ibe yisibopho esinamandla nesihlala njalo phakathi kwabantu ababili. (Genesise 2:​24) Ngokuhamba kwesikhathi, zingenza nokuba ungabe usaba nandaba nokulungile nokungalungile. Ngokwesibonelo, ochwepheshe bathi abantu besilisa abahlale bebuka izithombe ezingcolile, bangase bangabi nandaba nokuhlukunyezwa kwabesifazane.
IBhayibheli likhuluma ngabantu ‘abangasenawo nhlobo umuzwa wokuziphatha okuhle.’ (Efesu 4:19) Unembeza wabo awusazweli kangangokuthi abasezwa buhlungu ngokwenza izinto ezimbi.
Inganekwane: Izithombe ezingcolile zingakufundisa ngocansi.
Iqiniso: Izithombe ezingcolile zifundisa ukuba nobugovu. Zenza ubheke abanye njengezinto nje zokwanelisa izifiso zobugovu. Akumangazi-ke ukuthi enye inhlolo-vo yaphetha ngokuthi, labo abakwenza umkhuba ukubuka izithombe ezingcolile mancane amathuba okuba bathole ukwaneliseka ngokocansi lapho sebeshadile.
IBhayibheli litshela amaKristu ukuba agweme “ubufebe, ukungcola, isifiso sobulili, isifiso esilimazayo, nokuhaha”​—zonke izinto ezikhuthazwa izithombe ezingcolile.​—Kolose 3:5.
Inganekwane: Abantu abagwema izithombe ezingcolile banenhlonipho edlulele ngezindaba zobulili.
Iqiniso: Abantu abagwema izithombe ezingcolile banombono oqondile ngocansi. Bayaqaphela ukuthi luyisipho uNkulunkulu asidalele ukuba siqinise isibopho esiphakathi kwendoda nomkayo abazibophezele komunye nomunye. Labo abanombono onjalo banamathuba amakhulu okuthola ukwaneliseka ngokocansi lapho sebeshadile.
IBhayibheli liyakhuluma ngocansi. Ngokwesibonelo, lithi emadodeni ashadile: “Ujabule ngomfazi wobusha bakho . . . Kwangathi njalo ungagajwa uthando lwakhe.”​—IzAga 5:​18, 19.
Kuthiwani uma uzwa sengathi isilingo sokubuka izithombe ezingcolile sinamandla? Ikhasi lomsebenzi elithi “Indlela Yokugwema Izithombe Ezingcolile,” lingakusiza.
Qiniseka ukuthi ungakwazi ukunqoba isilingo sokubuka izithombe ezingcolile. Ungafunda nokuyeka ukubuka izithombe ezingcolile uma kuwukuthi ubusuqalile ukuzibuka. Kuningi oyokuzuza ngokwenza kanjalo.
Cabanga ngoCalvin, ovumayo ukuthi waqala ukubuka izithombe ezingcolile cishe eneminyaka engu-13. Uthi: “Ngangazi ukuthi akulungile, kodwa ngangihluleka ukunqoba isilingo sokuzibuka. Kodwa, ngemva kokuzibuka ngangizizwa kabi. Ekugcineni, ubaba wakuthola lokhu​—futhi eqinisweni, ngazizwa ngikhululeke kakhulu! Ekugcineni, ngakwazi ukuthola usizo engangiludinga.”
UCalvin wafunda ukugwema izithombe ezingcolile. Uthi: “Ukuhileleka ezithombeni ezingcolile, kwaba yiphutha elikhulu engisajeza namanje ngalo ngoba lezi zithombe zisekhona engqondweni yami. Kanti ngezinye izikhathi, sisangifikela isilingo sokucabanga ngezinto engingazibona uma ngibuka lezi zinto okungafanele ngizibuke. Kodwa ngibe sengicabanga ngendlela engijabule ngayo, engihlanzeke ngayo, nendlela ikusasa lami eliqhakaze ngayo uma ngenza izinto ngendlela kaJehova.”
Thumelela Thumelela Kungani Kufanele Ugweme Izithombe Ezingcolile?